आधारभूत तहको सिकाइ नै मजबुत हुनुपर्छ | Mechikali Daily
आधारभूत तहको सिकाइ नै मजबुत हुनुपर्छ
Posted By: Mechi Kalion: १५ चैत्र २०७३, मंगलवार ०४:५१
नेपालको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यकासाथ २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लाूग गरिएको थियो । त्यही योजना अन्तर्गत पाठ्यक्रम पनि तयार गरियो । विद्यालयको संरचना पनि परिवर्तन भयो । यी सबै काम भइसकेपछि नयाँ शिक्षा विभिन्न जिल्लाहरुमा लागू गर्दै २०३२ सालसम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसपछि प्राथमिक शिक्षा परियोजना २०३८ सालमा सञ्चालन हुँदा यसको प्रमुख लक्ष्य शिक्षामा गुणात्मक विकास गर्ने शिक्षा क्षेत्रको सुधार र प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमताको सदृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृढीकरण गर्नु रहेको थियो । शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउँनका लागि विभिन्न योजनाहरु तय गरिएको हुनाले शिक्षकलाई तालीमको व्यवस्था विद्यालय पुनःनिर्माण, भौतिक सुविधा, विद्यालयको वातावरण सुधार, महिला शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र शैक्षिक सामाग्रीको विकास आदि विस्तारित कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा थिए । त्यस समयमा प्राथमिक तहको शिक्षालाई सर्वसुलभ सबैको पहुच पु¥याउने अभियान नै सरकारको हुँदा विद्यालको पुनःनिर्माणमा तीव्रता पाएको इतिहासले बताउँछ । विद्यालय त धमाधम खुले तर व्यवस्थापनका लागि शिक्षा योजना पद्धतिलाई अगाडि बढाउँने मूललक्ष्यका साथ २०४० सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । वि.स. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पश्चात् शिक्षाको गुणस्तमा क्रमशः फ्mेरिदै गएको पाउँछौ । विद्यालय स्थापनाका लागि नगर, गाउँ वार्डहरुमा एउटा लहर नै चलेको थियो । विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई पनि तालिमको व्यवस्था गरी प्रशिक्षित तुल्याउने काम पनि भएकै थियो । बालकेन्द्रित जीवनोपयोगी र मूल्यमान्यतालाई बढावा दिने काम उसबेलाको आयोगले गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयनमा भने सुस्ततानै देखिन्छ ।
शिक्षा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म मजबुद बनाउँनु आवश्यक देखिन्छ । किनभने आधारभूत तहको सिकाइले माध्यमिक तहको सिकाइलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यस विषयमा महत्वपूर्ण योगदानका लागि शिक्षकहरु नै लाग्नु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय तहमा दशकौँदेखि प्रमुख समस्याको रुपमा देखिदै आएको सिकाइ उपलब्धि पछिल्लो कालखण्डमा झन विकराल बन्दै आएको छ । यसको मुख्य कमजोरी भनेकै विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा हो ।
किनभने कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षक जुन विषय पढाए पनि हुने योग्य र विषय विशेषज्ञ हुन नपर्ने अनि अंग्रेजी पढाउन नखोज्ने वा चाहाना नराख्ने शिक्षकलाई पनि जबर्जस्ती पढाउन लगाउने र कक्षाकोठामा प्रवेश हँुदैमा राम्रो पढाइ भयो भन्ने विश्वासले नै आज आधारभूत तहको सिकाइ उपलब्धि कमजोर बन्दैछ । किनभने अंग्रेजी वा गणित विषयको कुनै दख्खलै छैन भने उसले कसरी सिकाउन सक्छ । यो नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसैले कक्षा एकदेखि नै विषय विशेषज्ञ शिक्षक राख्नु पर्छ । अझै यसलाई प्रस्ट भन्नुपर्दा विज्ञान ,गणित, नेपाली, सामाजिक लगायत जुनजुन विषयमा रुचि हुन्छ सोही विषय अध्यापनका लागि छनौट गर्ने अनि मात्र सिकाइ मजबुत बन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षकहरुले भन्छन् विद्यार्थीको सिकाइस्तर अभिभावको चेतना तथा न्यून लगानीका कारण सिकाइ उपलब्धि बढाउन नसकिएको ठान्छन् । शिक्षाविद्हरुले भन्छन् शिक्षकको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा कक्षा कोठाको रुखो वातावरणले असहज परीस्थिति निम्त्याउँछ । यी विषयमा शिक्षकले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । अर्कोकुरा समुदायले भन्ने गर्छन् कि, शिक्षकले तल्लो कक्षामा ध्यान दिएर कहिल्लै मन,वचन र कर्मले पढाउन चाहेनन् । त्यसैले सोचेको परिणाम हात लाग्न सकेको छैन । शिक्षकहरुले पठनपाठनको मुख्य आधार पाठ्यपुस्तकलाई बनाएका छन् । पाठ्यक्रमको आधारबाट पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिएको हुन्छ । कतिपय शिक्षकहरुले पाठ्यक्रम तथा पाठ्पुस्तक नै अध्ययन नगरी कुनै योजना बिना नै कक्षा कोठामा प्रवेश गरी आफ्नो शिक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउँदा सोचेजस्तो सिकाइ उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको कुरा सरोकारवालाहरुले बताउँँछन् । त्यसैले भन्ने गर्छन् कि यदि शिक्षकबाटै पढ्ने बानीको विकासलाई उलङ्ंघन गरिन्छ भने के विद्यार्थीको क्षमता माथि प्रश्न गर्न मिल्ला ? आज शिक्षक जान्ने भए भने विद्यालय तथा समुदाय नै जान्ने हुन्छन् । त्यसैले यस विषयमा विशेष चनाखो भई पढ्न र पढाउनका लगि अध्ययनशील हुन शिक्षक नै पर्छ ।
कक्षा एकदेखि पाँचसम्म कसरी पढाइएको छ भनेर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइदैन् । जसरी माध्यमिकतह परीक्षाको सिकाइ उपलब्धिलाई विषेश छलफ्mल गरिन्छ तर आधारभूत तहको सिकाइ उपलब्धि र परीक्षाको परिणामलाई लिएर चर्चा गरिदैन । सरकारले पनि आधारभूत तहको परीक्षामा विद्यार्थीहरुलाई अनुत्र्तीर्ण गराउन नपाइने हँुदा सरासर उत्र्तीर्ण गराउँदै लैजानु पर्ने नीतिको कारण आधारभूतहको सिकाइले माध्यमिक तहको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको कुरा सरोकारवालाहरुले बताउँछन् । समग्र शैक्षिक प्रक्रियाको अन्तिम नतिजा सिकाइ हो । सिकाइ उपलब्धिका बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गर्दै जानुपर्छ । त्यस अध्ययनको क्रममा सुधार गर्नुपर्ने भए तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण सिकाइ उपलब्धि एस.एल.सी.को नतिजामा खोज्ने परम्पराले गर्दा आधारभूत कक्षा १ देखि ५ सम्मको सिकाइलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिरहेका छौं । त्यसले गर्दा ती कक्षाको सिकाइ उपलब्धि औषत ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । हाम्रो विद्यालय प्रणालीमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको पढाइलाई चरम उपेक्षाको शिकार भएको छ । सरकारी लगानी छात्रछात्रा र शिक्षक अनि स्कुलसंख्या आदिका आधारमा शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यही तहको छ । तर त्यही तहमा सिकाइ न्यूनतम उपलब्धि आउन नसक्नु पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । यस विषयमा न त पेशागत संघ संगठनहरुले आवाज नै उठाउन सकेका छन् न त राज्यले नै ठोस पहल गर्न सकेको छ । शिक्षकहरुले आफ्नो पेशा भनेकै जागिर हो यसमा खासै सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल गरेको पाइँदैंन । हामीहरुले जग बलियो खोज्दैनौ छानो मजबुत होस भन्ने चाहाना राख्छौं । शिक्षाक्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबैको ध्यान अब छिट्टै यस विषयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
किनभने देश अब संघीयतामा जाँदैछ । त्यसैले पनि आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा पुनःसरचना गर्दा प्रदेश सरकार मातहत हुनेभएकोले पनि स्थानीय तहको ध्यान यसतफ्र्m जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वत्र चर्चा छ । त्यसकारण पनि यी सबै कुराहरुलाई परिवर्तन गरी आधारभूत तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई विषेश सुविधा प्रदान गरी सिकाइ दिगो बनाउन पहल कदमी गरी माध्यमिक शिक्षाको सिकाइलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र सरोकारवाला, अभिभावक र राज्यले खोजेको शिक्षा प्राप्त गर्दै उपलब्धि बढ्नेमा कसैको पनि दुईमत नहोला ।